Vahaolana famonoana Blow Molding - Delta Engineering - Hatsarao ny fahaizanao!
Vahaolana amin'ny plastika: milina fanamboarana sy fonosana tavoahangy plastika sy kaontenera: palletizers, tester de bocage, ...
Vahaolana amin'ny famolavolana tsofina
Ny vahaolana fonosana ho an'ny indostrian'ny famolavolana kapoka dia misy bagger, fonosana fantsom-bokatra, palletizers & depalletizers, packer d'exploitation, tonelina mihena, trano fitahirizana tray, vahaolana vahaolana…
Tombony amin'ny zavatra niainantsika amin'ny fifehezana kalitao ny tavoahangy plastika na kaontenera anao: fitiliana amin'ny famoahana, fanamarinana ny lanjany, fitaovam-pitsapana milatsaka ...
Ireo tavoahangy tavoahangy (fehikibo matevina, rojo vy, fifampihomehezana), fikarakarana pallet, avo lenta, mpanova lalana…
Famintinana ny vokatra sy serivisy
Tranonkala & politikan'ny fiainana manokana
Kitapo fanaovana kajy
Ao amin'ny Delta Engineering, manana traikefa mihoatra ny 25 taona izahay vahaolana amin'ny famolavolana koroka.
Hatramin'ny nananganana anay tamin'ny 1992, dia nifantoka tamin'ny filan'ny mpanjifanay. Raha ny tena manokana, dia namolavola a vahaolana feno amin'ireo olana iainan'ny orinasa eo amin'ny sehatra.
Mba hampisehoana, ny lisitry ny vokatra dia misy palletizers sy depalletizers, packer tray, fitaovana fanaraha-maso kalitao toy ny tester de leak na checkers mavesatra, bagger, tunnels mihena, packer d'exploitation, solution solle pack, silo, warehouse tray, system take-out, machine cutting, conveyors , latabatra fampangatsiahana sy buffer, latabatra famoahana entana, mpametaka tavoahangy, mpandova lane, ascenseur tavoahangy, mpanara-maso tsipika, mpikirakira plastika…
Raha fintinina, milina sy vahaolana isan-karazany ho an'ny famokarana sy fonosana tavoahangy plastika sy kaontenera!
Ankoatr'izay, ny iraka ataontsika dia:
Hatsarao ny fahaizanao!
Noho izany antony izany dia manamboatra sy manamboatra vahaolana manatsara ny fizotry ny famokaran'ny mpanjifanay izahay amin'ny alàlan'ny fampihenana ny asa-tanana, ny fonosana ary ny vidin'ny fitaterana.
Noho io fomba io dia tonga ny Delta Engineering iray amin'ireo mpamatsy vahaolana automatique voalohany ho an'ny indostrian'ny famolavolana kapoka.
Ny fahombiazantsika dia mifototra amin'ny vahaolana maro karazana famolavolana fikotranana tsara.
Ho fanampin'izany, azo hazavaina amin'ny alàlan'ny mpiasanay mahay, ny tsy fivadihan'izy ireo ary noho izany ny fanangonam-bokatra traikefa, izay tena mahasoa ny mpanjifanay.
Antony iray hafa dia zava-baovao. Ny fanavaozana ataonay dia maneho ny fenitra avo lenta napetrakay ho an'ny tenanay amin'ny maha-mpitarika tsena sy fanavaozana antsika amin'ny indostrian'ny riandrano atsimo.
Ary, farany nefa tsy azo odiantsy, misaotra ny firoboroboana amin'ny fiara tsy tapaka hanatsara ny anay fanompoana na dia lavitra aza: ezahantsika fametrahana tsara ary fanohanana aorian'ny fivarotana.
Vokatr'izany dia napetraka amin'ny toerana tokana isika mba ahafahana mameno ny fangatahan'ny mpanjifantsika eran-tany.